Kedu ka esi mesie anya anwu anwu?
Dị ka ha na-ekwu, anya - nke a bụ mirror nke mkpụrụ obi, n'ihi na ha ga-enwe ike mesie uru, iji wee mara kacha mma. Nwee etemeete na uwe dị mkpa, àgwà nke ọdịdị ha, na agba nke anya ha, ka ha wee ghara ịla n'iyi, kama nke ahụ, ha na-ele anya karịa ka ha dị. Ka anyị lebakwuo anya n'ụzọ kwesịrị isi mesie anya na-acha anụnụ anụnụ.
Kedu ka esi mesie agba nke anya anụnụ anụnụ?
Anya na-acha anụnụ anụnụ dị mma nke ukwuu, ma ọ bụrụ na ọ dị mma ma ọ bụ uwe, ha nwere ike ime ka ha dị ọcha ma ghọọ ọbụna isi awọ. N'ezie, onye ọ bụla nwere anya na-acha anụnụ anụnụ, nke dị ka ọdọ mmiri ọdọ mmiri, ga-achọ iji mesie ya ike, na ọbụna mee ka ha nwekwuo nkwupụta. Maka nzube ndị dị otú ahụ, oghere anya na-agbanwe agba nke anya ma ọ bụ mee ka ndo doro anya zuru oke, ma ọtụtụ anaghị amasị ya. Ya mere, olee otu ị ga - esi mesie anya na - acha anụnụ anụnụ na - enweghị ike iji usoro ndị dị otú ahụ?
Kedu ka esi mesie anya na-acha anụnụ anụnụ nke etemeete? Site n'enyemaka nke etemeete, ụmụ agbọghọ na-eme ka anya ha dịkwuo ọnụ, na anya ha - nnukwu ihu. Ma site n'enyemaka nke nlekota, ị nwekwara ike mesie ike nke anya gị. Blue eyes are perfect for shades of blue, blue and violet. Na-akpali mmasị na-acha odo odo na ụda ọlaedo, nke na-acha anụnụ anụnụ mma. Tụkwasị na nke ahụ, ọ dị mma maka anya na-acha anụnụ anụnụ na etemeete na ụda ojii, ebe ọ bụ na nwa n'ozuzu bara ezigbo uru na-emesi anya nke ndò ọ bụla. Ma isi awọ bụ ihe na-achọsi ike iji zere, ebe ọ ga-eme ka anya nke anya gị daa.
Kedu ka esi eji akwa akwa akwa anya? Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-enwe afọ ojuju nanị maka ime ihe, ma a na-ahọrọ ụfọdụ uwe iji mesie ike nke anya ha. Anya na-acha anụnụ anụnụ nwere ike ime ka uwe na-acha anụnụ anụnụ, àgwà turquoise na-acha anụnụ anụnụ. N'ozuzu, ihe niile na-acha anụnụ anụnụ, si na ọchịchịrị na oyi na-ekpo ọkụ na ìhè. Ọzọkwa, dị ka eji etemeete, acha odo odo na lilac shades ga-edozi. Ị nwere ike igwu egwu na iche - ọdịiche na-acha anụnụ anụnụ nke anya ga-eme ka ihe ndị acha uhie uhie na okooko osisi pink doo. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ị na-eyi ihe edo edo, ma ọlaedo kachasị mma iji ngwa. Ma, n'ezie, agba oji na agba ọcha, nke zuru ụwa ọnụ, ya mere na ha ga-ejikwa anya mmiri na-acha edo edo. Na-eburu n'obi na ọcha ga-eme ka anya gị dị mfe, na oji - na-agba ọchịchịrị.
Enwere ụmụ agbọghọ maka ịse foto
Kedu ihe ị ga-eyi akwa akpụkpọ ụkwụ?
Ụdị ụlọ ọrụ maka ụmụ nwanyị
Harley Quinn T-uwe
Kedu ihe ị ga-eji ejiji ụra?
Nnweta na Cyprus
Kedu otu esi ahọrọ agba nke uwe ahụ?
Na ihe na-eyi obere jeans?
Oge foto nke afọ ọhụrụ - echiche
Ejiri aka gị na-agba ịnyịnya
Gịnị kpatara nrọ nke igwu mmiri n'oké osimiri?
Azu azu ejiji maka ụmụ agbọghọ 2014
Achịcha Prague bụ uzommeputa kpochapụwo
Ofe si n'oké osimiri
Cyanosis acha anụnụ anụnụ - ngwa
Achịcha "Fairy Tale" - uzommeputa na mkpụrụ osisi poppy
Mkpụrụ osisi okooko osisi na February - kedu ihe ị ga-akụ?
Ọnụ mpempe ọnụ na mbara ihu ahụ
Nri maka steak
Ekpere nye Nicholas Onye Nzọpụta maka enyemaka n'ihe
Mmiri MDF nke mmiri
Carpathian Bellflower: ịkọ ihe
Kedu aha aha Christina?
Esi esi enweta squirrel?
Ịkụ apụ apụl na oge opupu ihe ubi bụ iwu ndị dị mkpa ịmalite ịmara
Kedu ka esi kpoo kebab?
Salad na walnuts
Blackberry - ọma na ihe ọjọọ